Iyo Flash tweak inovandudzwa pamwe nezvinonakidza zvinongedzo zvekuvandudza mashandisiro ayo | IPhone nhau
Iyo Flash tweak inovandudzwa pamwe nezvinonakidza zvinongedzo zvekuvandudza mashandisiro ayo
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | Jailbreak
Kune mamwe ma tweaks anga ari pamusika kwenguva yakareba uye akakwanisa, kunyangwe nenhau, kuramba iri sarudzo yakanaka kune vashandisi. Zvichida chimwe chezvinonyanya kufadza kuzadzikisa kamera yako ndizvo chaizvo zvine zita reFlash. Chaizvoizvo, kusvika zvino unogona kuishandisa nechitarisiko cheiyo shortcode iyo yakagadziriswa kana uchiona rima nharaunda. Rangarira kuti iyi tweak yakasarudzwa kune yakanakisa yegore ra2015 uye kuti, pamusoro pezvo, ndiyo chete inotora mukana weiyo iPhone ambient mwenje inzwa kukwanisa kushanda.
Chii chitsva mu flash kuvandudza? Chaizvoizvo, zvinoita kuti iwanikwe zvakanyanya kubva kukiyi skrini kuti ikwanise kumisikidza iyo tweak iyo ikozvino inobvumidzawo kushandiswa kweSiri nenzvimbo yakachengeterwa iyo app iyo inogona kukuitira iwe mazano iwe aunoda pasina kudzivirira kudonha pane skrini neapp. Asi, kupfuura zvese, Flash yakwanisa kuvandudza zvakanyanya kushandisa kweiyo iPhone sensor.
Muchokwadi, chinonyanya kufadza chinhu nezve ino gadziriso yeimwe yeakakosha matweaks a2015 ndiko mukana wekugadzirisa mwenje mwenje kune zvakatipoteredza. Haasi rima rese rakasviba uye ndipo panosvika sarudzo iyi nyowani. Chiedza cheChiedza ndiyo mukana uyu unodaidzwa uye inoshandura kupenya iine chiratidzo chakatwasuka kurudyi kuita inzwa isina mwenje yakasimba munzvimbo dzine rima. Unogona kuishandisa kugadzirisa kubwinya kwaive kwakanyanya, kana kungojairana nharaunda yehusiku isingade mwenje wakawandisa sezvaiwanzoitwa mushanduro yapfuura
Flash ichiri a yemahara tweak iyo iwe yaunogona kuwana mune yeBigBoss repository.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Iyo Flash tweak inovandudzwa pamwe nezvinonakidza zvinongedzo zvekuvandudza mashandisiro ayo
Mhoro Cristina, wakamboedza iyo yechiyero chemwenje? Nekuti ini ndinofunga hazvisi chaizvo zvaunoisa iwe. Iyo inongoshandiswa kugadzirisa kuti yakawanda sei ambient mwenje iyo icon inoita kunge inobatidza mwenje. Zvirinani pane yangu iphone 5s ndizvo chete zvazvinoita. HAPANA kutonga kusimba kwechiedza chemwenje. Siri haina kushandiswa zvachose, kana. Chinhu chega chinoita basa iro ndechekuti iwo mazano eSiri anoonekwa pane yekukiya sikirini (mimhanzi application kana iwe uchibaya mumahedhifoni, iko kushanda kwechitoro cheapuro kana uri padyo neayo, nezvimwewo) hazvipindire neiyo icon icon. Inoonekwa pachiratidziro uye nekudaro inogara ichikwanisa kuwana tochi. Wakamboedza iyo tweak? Zvirinani kuti handina kukwanisa kuita zvinopfuura izvozvo ...
TaiG iri kushandawo paiyo iOS 9.2 Jailbreak
Nzira yakanakisa yekuwana Apple Pay vatengesi vanoenderana ndeye PayFinder